Ndị otu WhatsApp. ? Soro ndị otu WhatsApp
Otu WhatsApp. Whatsapp Ọ bụ akụrụngwa izi ozi ngwa ngwa a na-eji eme n'ụwa niile, nke a arụpụtala ọtụtụ puku otu WhatsApp na ndị ọrụ arụpụtara ka ha nwee ike mee enyi na ikwu okwu n'isiokwu ụfọdụ, ụtọ ma ọ bụ mmasị gị.
Anyị chịkọtara nke kacha mma WhatsApp otu ka ndị na-agụ akwụkwọ anyị wee nwee ike sonyere ụdị ndị ha nwere.
Will ga-ahụ ihe ndị a niile n’elu ikpo okwu GroupsofWhatsapp.Online:
1 Otu WhatsApp: Ntuziaka zuru ezu
2 Kedu ihe WhatsApp dị iche iche?
3 Etu esi abanye otu WhatsApp?
4 Whatsapp jikọrọ otu
4.1 Gịnị bụ njikọ WhatsApp dị iche iche?
5 Otu esi eke otu WhatsApp?
6 Etu esi emehe WhatsApp iche iche?
7 Etu esi ahapu ndi WhatsApp?
7.1 Nwere ike ịhapụ ndị otu WhatsApp na-enweghị nlele?
8 Soro WhatsApp Otu
9 Mepụta njikọ otu WhatsApp
Otu WhatsApp: Ntuziaka zuru ezu
Peeji a bu Zuru ezu na WhatsApp otu. N'ebe a, ị ga - amata ihe niile ịchọrọ ịma sonye n’otu ma sonyere na ha na-azụ ha nke ọma. Ga-ahụkwa nke a Ndepụta zuru ezu na otu WhatsApp kachasị mma isonyereNke kewara. Ọ bụrụ na ịchọghị ịgụ akwụkwọ ozi a zuru oke ma chọọ ịmalite ịchọgharị ndepụta anyị, ị nwere ike ịme nyocha.
Nchọta Whatsapp Group
Kedu ihe WhatsApp dị iche iche?
Otu WhatsApp bu otu ndi o bula nke ha n’etu iji ngwa WhatsApp meputara iji jide mkparita uka n'etiti ndị enyi ma ọ bụ ndị ọrụ dị iche na otu isiokwu.
Anyị niile nwere ahụkarị WhatsApp iche iche dị ka ndị ezinụlọ, otu ndị enyi n'ụlọ akwụkwọ, otu ndị otu bọọlụ, ma ọ bụ otu ngwụcha izu ... mana site na WhatsApp ị nwere ike mepụta otu n’otu ụdị isiokwu dị iche iche ma kwe ka ndị ọrụ si ebe ọ bụla n'ụwa gbakọta iji zute ndị mmadụ, mee ndị enyi ma kparịta isiokwu nke otu ahụ.
Etu esi abanye otu WhatsApp?
Mgbe mmadụ mebe WhatsApp otu, gbakwunye n’otu ahụ ndị ọ họọrọ n’ime ndepụta kọntaktị ndị ọ chọrọ isonye n’otu ahụ. Ruo ugbu a onye ọ bụla nwere ike itinye gị na otu WhatsApp na-enweghị ịrịọ maka ikike, mana Whatsapp Already na-arụ ọrụ na mmelite ọhụrụ ebe ị ga-anabata arịrịọ ahụ tupu etinye gị na otu ndị otu. Mgbe e mepụtara otu, onye otu ahụ nwere ike ịkekọrịta njikọ otu maka ndị ọrụ ọhụrụ iji sonyere otu ahụ. Na ibe a ị nwere ike banye na njikọ nke puku kwuru puku ị ga - esonye.
Whatsapp jikọrọ otu
Gịnị bụ njikọ WhatsApp dị iche iche?
Njikọ ma ọ bụ njikọ nke otu WhatsApp ha bụ (dịka m gwarala gị), njikọ ndị nchịkwa na-ekerịta ka ndị ọzọ nwee ike isonyere otu ahụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye nchịkwa nke a otu WhatsApp ị mepụtara na mkpanaka gị, ị nwere ike nweta njikọ site na otu ahụ ịkpọ ndị ọzọ ya na usoro ndia:
Banye na otu nke imeputara.
Pịa aha otu dị n'elu.
Pịa "ịkọrọ" na elu.
Họrọ nhọrọ "Kekọrịta njikọ" ma ọ bụ nhọrọ "Detuo njikọ".
Otu esi eke otu WhatsApp?
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị mebe otu WhatsApp, ị nwere ike ịme ya site na isoro usoro ndị a dị n'okpuru:
Pịa "Mepụta otu" n ’elu nke ngwa WhatsApp gị.
Tinye sonyere ndị otu n’etiti kọntaktị gị wee pịa "na -eso".
Tinye aha otu na foto maka otu a ma pịa "kee".
Emere nke a, ị nwere ike ịkekọrịta jikọọ ma ọ bụ njikọ nke otu WhatsApp gị GroupsofWhatsapp.Online
Etu esi emehe WhatsApp iche iche?
Mgbe ụfọdụ, ụda WhatsApp canma Ọkwa nwere ike iwe gị iwe mgbe ị na-anata WhatsApp oge niile site na otu dị iche iche. Nke a nwere usoro dị mfe ebe ị nwere ike Gbanyụọ òtù WhatsApp gị. para mechie otu WhatsApp, ị ga - emerịrị:
Tinye otu WhatsApp ịchọrọ ịgbachi nkịtị.
Họrọ nhọrọ "gbachi nkịtị".
Họrọ otu nhọrọ n'etiti ogbi "Awa 8", "izu 1" o "1 afọ".
Wayzọ ọzọ na- ogbi otu Ọ bụ dị ka ndị a:
Sia mkpịsị aka gị n’elu otu a ka iwere aka ekpe.
Pịa "gbachi nkịtị".
Etu esi ahapu ndi WhatsApp?
Hapụ otu WhatsApp Ọ dị mfe. Naanị ihe ị ga - eme:
Pịa "Hapụ ndị otu".
Nwere ike ịhapụ ndị otu WhatsApp na-enweghị nlele?
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhapụ otu WhatsApp na ndị ọzọ sonyere n’otu ahụ amata, ọ dị m obi ịgwa gị na onweghị ụdị nhọrọ ugbu a. Mgbe ịhapụ otu, ndị ọzọ enweta ozi na otu ahụ na-agwa gị na ịhapụla otu ahụ.
Sonye ndi otu WhatsApp n’elu ikpo okwu anyi Ọ dị mfe.
Ga-achọgharị naanị n'etiti ndị WhatsApp bipụtara, ma mgbe ịchọta otu ịchọrọ isonyere, pịa "Njikọ otu". A ga-edugharị gị na WhatsApp ozugbo, a ga-ajụ gị ka ị gosi na ịchọrọ isonyere ndị otu a.
[Soro Otu WhatsApp Na-eme]
Mepụta njikọ otu WhatsApp
Ọ bụrụ na ịchọtaghị nke a otu WhatsApp ị na-achọ, ana m akpọ gị oku ka ị mepụta ya n'onwe gị ma kekọrịta ya na ikpo okwu anyị ka e wee nwee ike ịgbakwunye ndị sonyere ọhụrụ. Nwere ike mepụta otu WhatsApp ma bipụta ya.